संविधानसभाको नियमावली संशोधनबारे सुझाव दिन गठित समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाण्डौ, माघ २३ । संविधानसभाको नियमावली संशोधनबारे सुझाव दिन गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । दलहरुबीचको विवादका कारण आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेको एक साता बितिसक्दा पनि संविधानसभामा
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघद्धारा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र
काठमाडौं, माघ २३ । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले सुकुम्बासी आयोगमा गैर सुकुम्बासी राखेको भन्दै समावेशी बनाउन माग राख्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
Date : 05 Feb 2012
पाँच सय केजी चरेश सहित नागढुंगाबाट चार जना पक्राउ
काठमाडौं, माघ २२ । पाँच सय केजी चरेश सहित आइतबार प्रहरीले नागढुंगाबाट चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । चरेस सहित पक्राउ पर्नेहरुमा मकवानपुरका दिनेशकुमार रुम्बा, राजकुमार
इटहरीमा कुखुराहरु मर्न थालेपछि बर्ड फ्लु भएको पुष्टि, स्थानीय बासीन्दामा सन्त्रास
काठमाडौं, माघ २२ । एक सातादेखि सुनसरी जिल्लाको इटहरी र खनारमा धेरै मात्रामा कुखुराहरु मर्न थालेपछि बर्ड फ्लु भएको पुष्टि भएको छ । बर्ड फ्लु पुष्टि भएपछि
सरकारले चालेको कदमविरुद्ध रहेका पत्रकारका पक्षमा एमालेको पूर्ण साथ : भण्डारी
काठमाडौं, माघ २२ । एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले दलका नेताहरु दलीय मुद्दा र जातीय विवादमा केन्द्रित हुँदा संविधान निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाउएको छ । प्रेस चौतारी
धरान जांदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुंदा ३ जनाको मृत्यु
झापा, माघ २२ । झापाको बिर्तामोडबाट धरान जांदै गरेको यात्रुवाहक बस सुरुङ्गा २ मा दुर्घटना हुंदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मे १ ख ९१६ नम्बरको
बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका मजदुरहरु आन्दोलित
मकवानपुर, माघ २२ । मकवानपुरको बसमाडिस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । युनिलिभर नेपालका मजदुरहरुले ६ सुत्रिय माग राख्दै आजदेखि उद्योगका सम्पूर्ण कामकाज
सहमति जुटाउन बसेको संवैधानिक समितिको बैठक कार्यसुचिमा प्रवेशै नगरी स्थगित
काठमाडौं, माघ २२ । संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको संवैधानिक समितिको बैठक कार्यसुचिमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ । सिहंदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा प्रमुख
शान्ति प्रकृया पुरा नभएसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दैनौ कोइराला
बिराटनगर, माघ २२ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रकृया पुरा नभएसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नगर्ने बताएका छन् । आइतबार बिराटनगरमा पत्रकारसँग कोइरालाले सरकार भन्दा
काठमाडौं, माघ २२ । नेपाल आयल निगमले ग्यास कम्पनीहरुसँग लगत लिन थालेको छ । अभावको मौका छोपेर ग्यास कम्पनी र बिक्रेताले ग्यास लुकाएको हुनसक्ने आशंकामा निगमले
तीन दलका शीर्ष नेतालाई सहमति खोज्न आग्रह
काठमाडौं, माघ २२ । संवैधानिक समितिले मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई विवादीत विषयमा सहमति खोज्न आग्रह गरेको छ । समितिको आइतबरा बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति
Date : 04 Feb 2012
१५ वर्षीया छात्राको बलात्कारपछि विभत्स हत्या
दमक, माघ २१। बिहीबार विद्यालय गएकी एक छात्राको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। हल्दीबारी ४ बस्ने १५ वर्षीया सावित्री राजवंशीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।
काठमाडौं, माघ २१ । आज विश्व क्यान्सर दिवस, सबै मिलेर गरे सम्भव छ भन्ने नारा सहित नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाईंदैछ । संसारभर क्यान्सरका कारण
लाजिम्पाट क्षेत्रका घर भत्काउन सरकारले लगायो डोजर
काठमाडौं, माघ २१ । स्थानीयको विरोधका बावजुद सरकारले आजबाट लाजिम्पाट क्षेत्रमा घर भत्काउन शुरु गरेको छ। एकाबिहानै डोजर लगाएर लैनचौरबाट घर भत्काउन शुरु गरेपछि प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीयवासी र
तेस्रो डिभिजनमा लडाकु बिदाई प्रकृया अवरुद्ध
चितवन, माघ २१ । चितवनमा रहेको माओवादी सेनाका लडाकुको तेस्रो डिभिजनमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको लडाकू बिदाई प्रकृया रोकिएको छ । तेस्रो डिभिजनबाट शुक्रबार ७५ जना लडाकुले चेक बुझेका
आज सबै लडाकुलाई बिदाइ गरिँदै
काठमाडौं, २१ माघ । शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको लडाकु बिदाइ कार्यक्रम आज सबै लडाकुलाई एक साथ बिदाइ गरिने भएको छ । स्वेच्छिक अवकास रोजेका कैलालीको तालबन्द शिविरमा बाहेक अन्य
Date : 02 Feb 2012
पेट्रोलिय पदार्थको सहज आपूर्तिका लागी आवश्यक साढे चार अर्ब नदिए राजिनामा : आपूर्तिमन्त्री
काठमाडौं, माघ २१ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलिय पदार्थको सहज आपूर्तिको लागी आवश्यक साढे चार अर्ब नदिए राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विहीबार आयोजना
राष्ट्रपति यादवद्वारा जापानी संसदहरुसंग भेटघाट
काठमाडौ, माघ १९ । मित्रराष्ट्र जापानको मियागीका सांसद हात्सुमासा आनोडेराको अगुवाईमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल (हात्सुमासा ओनोडेरा, तोरु मायसावा, ताकेहिदे सुगाइ, इजी त्वाशिता, हिदेआकी मुराइ) ले राष्ट्रपति
ग्यास ब्यवसायी र बिक्रेताहरुद्धारा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग सुरक्षाको माग
काठमाडौं, १९ । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएपछि उपभोक्ता र विद्यार्थीहरुले ग्यास विक्रेता र डिलरहरुमा छापा मार्ने क्रम तीब्र पारेका छन् । उपभोक्ता र विद्यार्थीले
माओवादी अध्यक्ष दाहालद्धारा सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल चलाउन प्रस्ताव
काठमाडौं, माघ १९ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल चलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलका संसदीय दलका नेता तथा
राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिका बारेमा परेका उजुरीबारे सुनुवाइ
काठमाडौ, माघ १९ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिका बारेमा परेका उजुरीबारे बिहीबार सुनुवाइ भएको छ । सिंहदरवारमा बिहीबार स्विट्जरल्यान्डका लागि सिफारिस गरिएका
प्रधानमन्त्री हटाउन पहल थालिने - भण्डारी
बाँके, माघ १९ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिए अन्य प्रकृया अवलम्वन गरेर हटाइने चेतावनी दिएको छ । प्रेस चौतारी बाँकेले बिहीबार
काठमाडौं,माघ १८। विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण पटक पटक अबरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज बस्दैछ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा बिभिन्न विधेयकमा
कांग्रेस एमालेका सदस्यहरुले बुझाएको प्रतिवेदन पञ्चायती शैलिको : गच्छदार
विराटनगर,माघ १८। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री राज्य पुनर्संरचना आयोगको अल्पमत पक्ष कांग्रेस एमालेका सदस्यहरुले बुझाएको प्रतिवेदन पञ्चायती शैलिको रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा
काठमाण्डौं, माघ १८ । सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई बन्देज लगाउने गरी गरेको सूचनाको बर्गीकरण बिरुद्ध आन्दोलन थालेको नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले राजधानीको सोह्रखुट्टेमा छापा
काठमाडौं,माघ १८। वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले राजधानीको सोह्रखुट्टेमा रहेको एक डिलरमा छापा मारी लुकाइ राखिएको १ सय २९ ग्यास सिलिन्डर ग्यास जफत गरेको छ। मनकामना
प्रधानमन्त्री भट्टराई र अमेरिकी राजदूत डेलिसीबिच भेटवार्ता
काठमाडौं,माघ १८। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले आज भेट गरेको छ । डेलिसीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगी प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग भेट
जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिए फेरी आन्दोलनमा उत्रने गजुरेलको चेतावनी
काठमाडौं, माघ १८ । एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिए आफूहरु फेरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ
मूल्यवृद्धीविरुद्ध विद्यार्थीद्धारा उपत्यकाक लगाएत तिन जिल्लामा धर्ना
काठमाडौं,माघ १८। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धीको विरोधमा चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका १३ विद्यार्थी संगठनले आज पनि आन्दोलन गर्दैछन् । विद्यार्थीले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज उपत्यकाका
कांग्रेस सभापति कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहालबिच भेट वार्ता
काठमाडौं,माघ १८। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच सत्तारुढ र विपक्षबीच बढेको तिक्तताका बारेमा छलफल भएको छ । कोइरालालाई भेट्न उहाँकै
Pages 132 : You are at page 86 of 132